Home » Vaovao momba ny fiaramanidina » Lufthansa dia nandefa sidina faharoa nankany amin'ny Nosy Falkland
Ny sidina Airbus A350-900 avy any Hamburg mankany amin'ny Nosy Falkland miaraka amin'ny Alfred Wegener Institute dia kasaina hatao ny 30 martsa 2021
Airbus A350-900 dia hitondra mpikambana ekipa 40 ary mpahay siansa no hanangona angon-drakitra fandrefesana
Ivon-toerana Alemanina Aerospace (DLR) miaraka amina fitaovana fanaraha-maso dia ho hita ao ihany koa
Ny anton'ity sidina faharoa mankany amin'ny Nosy Falkland ity dia ny fanodinana ny ekipa Polarstern ary ny fikajiana ny ekipan'ny mpikaroka.
Rahampitso Lufthansa hiainga amin'ny sidina faharoa tsy miato avy any Hamburg mankany Mount Pleasant (MPN) any amin'ny nosy Falkland amin'ny anaran'ny Ivon-toerana Alfred Wegener Institute, Helmholtz Center for Polar and Marine Research (AWI) any Bremerhaven. Amin'ity indray mitoraka ity ny Airbus A350-900 dia hitondra ekipa mpiasan'ny 40 ao amin'ny sambo fikarohana Polarstern ary koa ireo mpahay siansa avy ao amin'ny Ivon-toerana Aerospace Alemana (Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt). Mandritra ny sidina, ny mpahay siansa dia hanangona angon-drakitra fandrefesana izay hanome fanazavana fanampiny momba ny fitarihan'ny sahan'andriambin'ny Tany manoloana ny fiaramanidina. Noho izany, ny sidina faharoa mankany amin'ny Nosy Falkland dia efa mandray anjara amin'ny siansa amin'ny lalana mankany South Pole.
Ny Airbus A350-900 dia hafindra avy any Munich mankany Hamburg amin'ny 14:30 rahampitso, ary kasaina ho tonga ao amin'ny seranam-piaramanidina Hamburg amin'ny 3:40 hariva miaraka amin'ny laharan'ny sidina LH9923. Ny harivan'io ihany, ny LH2574 dia hiainga ho any Mount Pleasant amin'ny 9 ora sy sasany alina. Ny fiaramanidina mitondra ny fisoratana anarana D-AIXQ, vita batemy amin'ny anaran'ny tanànan'ny Freiburg no mpikambana vaovao indrindra amin'ny fiaramanidina Lufthansa A30 ary iray amin'ireo maharitra indrindra eto an-tany ary fiaramanidina maharitra lavitra.
"Amin'ny sidina faharoa mankany amin'ny Nosy Falkland, tsy vitan'ny hoe faly izahay afaka manohana ny fitsangatsanganana ataon'ny AWI, fa koa mandray anjara lehibe amin'ny fikarohana bebe kokoa momba ny sahan'andriambin'ny Tany," hoy i Thomas Jahn, Fleet Captain ary Falklands Project Manager. "Efa 25 taona mahery izao izahay no nanohana tetikasa fikarohana momba ny toetrandro."
Ny anton'ity sidina faharoa mankany amin'ny Nosy Falkland ity dia ny fanodinana ny ekipa Polarstern sy ny fikajiana ny ekipan'ny mpikaroka. Hatramin'ny fiandohan'ny volana febroary, ekipa mpikaroka 50 teo ho eo no nanangona angon-drakitra manan-danja momba ny onjan-dranomasina, ny ranomandry ary ny tsingerin'ny karbaona ao amin'ny Ranomasina atsimo, izay ankoatry ny zavatra hafa, mamela ny faminaniana azo antoka momba ny toetrandro Teny an-dàlana niverina avy tany amin'ny faritra fikarohana any amin'ny Ranomasina Weddell atsimo, Polarstern dia nijanona teo amin'ny Bay Atka, izay nisy mpahay siansa miisa 25 niondrana an-tsambo: manokana ny mpiasa fahavaratra ary koa ny ekipa ririnin'ny Neumayer Station III, ary niverina tany Alemana ireo rehefa afaka 15 volana mahery tany Antartika. Amin'ny 2 aprily, i Lufthansa dia hitondra ny ekipa mpikaroka iraisam-pirenena AWI sy ireo mpahay siansa DLR hiverina any Alemana avy amin'ny Nosy Falkland. Ny fipetrahana dia voalahatra amin'ny 3:00 tolak'andro amin'ny 3 aprily ao amin'ny seranam-piaramanidina Munich miaraka amin'ny laharan'ny sidina LH2575.
Ny sidina voalohany avy any Hamburg mankany amin'ny Nosy Falkland, izay natao tamin'ny faran'ny volana janoary 2021, no sidina mpandeha lavitra indrindra tsy an-kijanona tamin'ny tantaran'i Lufthansa. Ny Airbus A350-900 dia tonga tao amin'ny toby miaramila Mount Pleasant taorian'ny nanidinana 13,000 kilometatra mahery tao anatin'ny 15 ora mahery.
Mba hahatonga ny fikarohana ho sariaka amin'ny toetrandro araka izay azo atao, ny Alfred-Wegener-Institut dia hanonitra ihany koa ny fandefasana CO2 amin'ny sidina.
Namidy Fly Leasing